Ziziphi iincwadi oza kuzifuna?
Ngokomthetho, ikhadi lakho loKhuseleko loLuntu kufuneka libonise igama lakho langoku lomthetho. Ukuba utshintshe ngokusemthethweni igama lakho ngenxa yomtshato, umtshato, umyalelo wenkundla okanye nayiphi na isizathu esisemthethweni, kufuneka uxelele ukhuseleko lweNtlalo ngokukhawuleza ukuze bakwazi ukukhupha ikhadi elikhuselekile leKhuseleko loLuntu.
Ukungaphumeleli ukwazisa ukhuseleko lweNtlalo yegama lakho kungatshintsha imali ngokulibazisa ukubuyiselwa kwemali yakho kunye nokuthintela umvuzo wakho ukuba ungeniswe kwi-akhawunti yakho ye-akhawunti ye-Secure Security.
Akukho sikhokhiso sokufumana ikhadi elichanekileyo leKhuseleko loLuntu, nangona kunjalo, ngenxa yamaphepha ofuna ukubonelela ngawo, awukwazi ukufaka isicelo kwi-intanethi enye.
Ukufumana ikhadi elikhuselekile leKhuseleko loLuntu, kufuneka:
Khuphela uze uprinte ifom yeS SS-5 - Isicelo seKhadi leKhuseleko loLuntu .
Gcwalisa isicelo kwaye uhlangane nobungqina obufunekayo bamaxwebhu obuni (jonga ngezantsi).
Thatha okanye uthumele isicelo kunye nazo zonke iimfuneko ezifunekayo kwiofisi ye-Social Security Office.
Amadokhumenti Ukukhonza Njengobungqina Bokuthi Igama Lomthetho Uguqule
Uya kufuna ububungqina begama lakho elisemthethweni langoku. Kwezinye iimeko, unokufuna kwakhona ukubonisa ubungqina bakho bokuba ngummi waseMzantsi Afrika okanye umhlali onogxininiso olusisigxina (isimo sekhadi eliluhlaza ).
Amadokhumenti Ukhuseleko loluntu luyakwamkela njengokuba ubungqina benguqu lomthetho luquka iikopi zokuqala okanye eziqinisekisiweyo:
Izatifikethi zobume ezibonisa igama elitsha; okanye
Imiyalelo yeNkundla yokuguqula igama.
Qaphela: Wonke amaxwebhu angeniswe kufuneka abe yimiqobo okanye iikopi eziqinisekisiwe yi-ejensi ekhuphayo. Ukhuseleko lweNtlalo aluyi kwamkela iikopi okanye ikopi ezingezisiweyo zamaphepha.
Ikopi eqinisekisiweyo yolu xwebhu iya kubakho inqaku eliphakanyisiweyo, elibiweyo, elichanekileyo, okanye elidibeneyo elibekwe kulo mbhalo liziko elikhuphayo.
Amanye ama-arhente aya kunika iikopi eziqinisekisiweyo okanye ezingavunyelwanga kwaye angahlawulisa imali eyongezelelweyo kwiikopi eziqinisekisiweyo. Xa kuyimfuneko kwiinjongo zoKhuselo loLuntu, soloko ucela ikopi eqinisekisiweyo.
Ukuba amaxwebhu akho aphezulu kakhulu
Kubalulekile ukuba uzazise utshintsho lweNtlalo yegama lakho utshintsho ngokukhawuleza.
Ukuba utshintshe ngokusemthethweni igama lakho ngaphezu kweminyaka emibili ngaphambi kokuba ufake isicelo sekhadi loKhuseleko loLuntu, okanye ukuba amaxwebhu anikezelayo anganiki ulwazi olwaneleyo ukukuchonga ngokugcwele, unokwenzelwa ukuba unikezele ngamaphepha amabonakaliso angaphezulu okuquka oku:
Ubuncinane idokhumenti elibonisa igama lakho elidala; kwaye
Uxwebhu lwesibini ngegama lakho elitsha lomthetho.
Ubu bungqina bobuNtu
Ukuba Ukhuseleko LwezeNtlalo likuxelela ukuba kufuneka uqinisekise ubungqina bakho njengommi wase-US, baya kwamkela isatifikethi sokuzalwa sase-US okanye ipasipoti ye-US kuphela.
Ukubonakalisa Ubunjani Bakho
Ukuba ufuna ukubonelela ngoKhuselo loLuntu kunye nobungqina bokuba ungubani, baya kwamkela kuphela amaxwebhu akhoyo akhombisa igama lakho langoku lomthetho, umhla wokuzalwa okanye ubudala, kunye nesithombe esandula. Imizekelo yamaphepha afaka phakathi:
Ilayisenisi yokuqhuba i-US;
Ikhadi lokuchonga elikhutshwa nguRhulumente; okanye
Ukuba awunayo naleyo maxwebhu, ukhuseleko lwezeNtlalo lungafumana amanye amaxwebhu, afana:
Ikhadi lochonga lomqeshwa;
Ikhadi lokuchonga esikolweni;
Ikhadi le-inshurensi yezempilo (ngaphandle kwekhadi leMedare); okanye
Ikhadi lokuchonga umkhosi wase-US.
Inombolo yakho ayiyi kuguquka
Ikhadi loKhuseleko loLuntu - oluya kuthunyelwa kuwe-liya kuba nenombolo efanayo yoKhuseleko loLuntu njengekhadi lakho elidala kodwa liza kubonisa igama lakho elitsha.
Khusela iNombolo yoKhuseleko loLuntu
Ukuthetha ngeenombolo zoKhuseleko lweNtlalo, zizinto eziphambili zokuba iziza zifuna ukukuphanga. Njengomphumo, i-Social Security yenze ixesha elide licebisa ukuba akufuneki ukuba kuboniswe nabani na ikhadi lakho loKhuseleko loLuntu. "Musa ukuphatha ikhadi lakho nawe. Gcina kwindawo ekhuselekileyo kunye namanye amaphepha abalulekileyo, "icebisa uLawulo loKhuseleko loLuntu.
Indlela yokudlala iBaccarat